Daawo Sawirrada: Dhismaha garoonka Stadium Muqdisho oo meel gaba-gabo maraya & qaab casri ah oo… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Daawo Sawirrada: Dhismaha garoonka Stadium Muqdisho oo meel gaba-gabo maraya & qaab...
Stadium Muqdisho oo dib u habeyn ku socota /waa sawirro cusub
Muqdisho (Halqaran.com) – Dhismaha garoonka Stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu marayaa meel gaba-gabo ah, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay dib u habeyn ballaaran uu ku socday.
Shirkadda dhiseysa Garoonka Stadium Muqdisho ayaa waxaa qandaraaska lagu dhisaya siisay Dowladda Federaalka Soomaaliya, kadib markii Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ay isaga guureen.
Shirkadan ayaa sanadkii hore mar joojisay dhismihii ay garoonka ka waday, kadib markii ay farriin hanjabaad ahayd kaga timid Ururka Al-Shabaab, inkastoo aan la garanayn waxa markii dambe lagu xaliyay.
Muuqaallo laga soo qaaday dib u habaynta ka soconaya garoonka kubadda cagta ee dalkeena ugu weyn ayaa waxaa ka muuqanaya qaabka casriga ah, ee xilligan dib loogu hawlgelinayo garoonkaasi.
Bahda kubadda cagta meelkastoo ay dalka ka jooggaan ayaa waxay isha ku hayaan goorta la soo geba-gabeen doono dib u habaynta ku socota Stadium Muqdisho.
Garoonka ayaa horseedi doono in cayaartoyda qurbajoogta Soomaaliyeed, xilliyada fasaxa ahi marka ay dalka yimaadaan, in ay kula tababartan kuwa kale ee dalka jooga, si ay uga faa’iideeyaan qibradooda xagga kubadda cagta.
Dib u hawlgelinta garoonkan ayaa qayb ka ah waxqabadka la taaban karo ee ay la timid Dowladda Madaxweyne Farmaajo, saddexdii sano ee uu xafiiska joogay.
Dhismaha garoonka Stadium Muqdisho oo meel gaba-gabo maraya
Garoonka Stadium Muqdisho